Politika · Novambra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Novambra, 2007
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Novambra, 2007
Libanona 22 Novambra 2007
Israely 20 Novambra 2007
Alohan'ny zava-drehetra dia misaotra an'i Tomavana niasa irery teto andro maromaro ary tsy dia kivy loatra. Manaraka izany dia mamporisika antsika izay mba manana fahalalana kely ny teny anglisy sy mazoto handika teny mba hanampy ny ekipa ihany koa. Izay no ela fa hiditra amin'ny votoatin-dresaka amin'izay isika. « Olom-pirenena...
Kamerona 13 Novambra 2007
Amerika Latina 12 Novambra 2007
Tantara Sovietika: Richard Sorge
Alemaina 09 Novambra 2007
Ny daty nanamarika ny andron’ny 7 novambra iray no notantarain’ny tao amin’ny ExecutedToday.com [Novonoina (ny datin’ny) androany] ka i Richard Sorge izay mpitsikilo “ nahombiazana tamin’ny fahafahany nanori-ponenana, amin’ny mahavahiny azy tao Japana mpankahala olona ivelan’ny fireneny tanteraka tamin’izany fotoana izany, Mpitsikilo tafakatra sy tafiditra tany amin’ny sehatra avon’ny fitondrana...
Rosia: Revolisiona sy Firaisampirenena
Rosia 09 Novambra 2007
Ankalazaina amin’ity taona ity ny faha-90 taonan’ny Revolisiona 7 novambra 1917 tanyRosia. Sean's Russia Blog [bolongan’i Rosian’i Sean] no nanoratra ireo zavanitranga nahatonga nyBoltshevika hiroborobo sady nofarifaritany ihany koa fa “azony tamin’ny fomba demokratika ny fahefana”; nosoratany ihany koa ny fandisoan-tantara ataon’ny mpanohitra Rosiana. Moscow Through Brown Eyes [ Moskoa...
Zimbaboe : Ry Mogabe ô, iangaviana re mba mialà amin'izay !
Zimbaboe 09 Novambra 2007
Ny blaogy This is Zimbabwe dia mampiseho sarina mpanohitra iray izay mitondra taratasy misy ny soratra mena hoe : « Pliz Mugabe must go now, people are starving » « Ry Mogabe ô, iangaviana re mba mialà amin'izay fa efa tena mosarena ny vahoaka » Ndesanjo Macha
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Novambra 2007